‘नेपालमा नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन’ - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २० असार २०७४, मंगलवार ०१:५६ |
काठमाडौं । भारतले दुई तहको स्थानीय निर्वाचनमार्फत नेपालले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेको भन्दै बधाई दिएको छ । रात्रिभोजसहित सोमबार साँझ उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग भएको भेटवार्तामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यस्तो बताएकी हुन् ।
निर्वाचनमा गरेको सहयोगप्रति महराले भारतलाई धन्यवाद दिएका थिए । सो अवसरमा विकास साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, सीमापार पूर्वाधार, जलविद्युत् परियोजनालगायतका बारेमा छलफल भएको थियो । साँझ ७ः४० मा सुरु भएको भेटवार्ता ९ बजेर २० मिनेटमा सकिएको थियो । नयाँ सरकार गठनपछि महराको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो ।
‘दुई तहको स्थानीय निर्वाचनमार्फत नेपालले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेकोमा भारतीय विदेशमन्त्रीले भारत सरकारका तर्फबाट नेपाललाई बधाई दिनुभयो,’ भेटवार्ताबारे माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग सदस्य तथा महराका प्रमुख स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईंले भने । उनका अनुसार कतिपय ‘नन पेपर’ पनि नेपालले दिएको छ । महराले दोस्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे कुराकानी गरेको तथा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सबै पक्षलाई साथ लिएर अघि बढ्ने बताएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ग्यास र भारुमा भारतको अरुचि
भारतीय विदेशमन्त्राी स्वराजले नेपालमा एलपिजी ग्यास स्टेसन नेपालले स्थापना भए त्यहाँसम्म भारतीय ग्यास बुलेटले आपूर्ति गरिदिने र त्यहाँबाट नेपाल आफैँले थप आफ्नै ग्यास बुलेटबाट आपूर्ति गर्न सक्ने बताइन् । उनको यो जवाफ समस्या समाधानतर्फ लक्षित नभएको नेपाली अधिकारीहरूका बुझाइ छ ।
स्रोतका अनुसार भारु सटहीमा पनि भारतले अपेक्षित सहयोगको आश्वासन दिएन । ‘हामी उपयुक्त समाधानको उपाय खोजिरहेका छौँ,’ स्वराजको जवाफ थियो । भारतले लगाएको गुड एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जिएसटी)का सन्दर्भमा महराले नेपाली वस्तुलाई भन्सार छुटमा भारत र तेस्रो देशमा पठाउन सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताएका थिए । यसबारे स्वराजले भर्खरै यो नियम लागू भएको र भविष्यमा हेरौँला भन्ने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो ।
नेपाललाई भारतको समर्थन
भारतले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपाललाई सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । महराले सोमबार र मंगलबार दिल्लीबाट नेपालसमेत हेर्ने विभिन्न देशका गैरआवासीय राजदूतहरूसँग दुई चरणमा समर्थनका लागि छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी अधिकांशले नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
देउवाको अनुकूलतामा भ्रमण तय गर्ने
दुवै पक्षले छलफल गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण टुंग्याउने सहमति भएको छ । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर, जिएसटी, भारु साट्न भएको समस्यालगायतका बारेमा छलफल भएको छ । पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउन भारतीय विदेशमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको एक नेपाली अधिकारीले बताए ।
भारतीय विदेशमन्त्री आउँदै
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज २६ साउनमा काठमाडौं आउने भएकी छिन् । बिमस्टेकको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनी काठमाडौं आउने जानकारी महरालाई दिएकी छिन् । बैठक २७ साउनमा तय भएको छ ।
को–को थिए भेटवार्तामा ?
भारतीय विदेशमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री महराबीचको भेटवार्तामा नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, सहसचिवद्वय भरतराज पौड्याल र भरत रेग्मी, महराका प्रमुख स्वकीय सचिव युवराज चौलागाईं, नेपाली दूतावासका राजनीतिक काउन्सिलर हरि ओडारीलगायत थिए । भारतका तर्फबाट राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी, सहसचिव सुधाकर दलेला, गोपाल बाग्ले तथा मन्त्रालयका अधिकारी सतिशचन्द्र गुप्ता, अपूर्वा श्रीवास्तव, मनीष चौहानलगायत थिए ।
Previousमहंगो मेसिन किन्दै वीर, अनियमितताको आशंका
Nextराजधानीमा हैजाका बिरामी !
मन्दिरका पुजारीद्धारा नाबालिका बलात्कृत
११ असार २०७३, शनिबार ०३:०९
अनमोलसंग डेटमा जान चाहन्छिन् सोफिया
७ चैत्र २०७४, बुधबार ०८:०९